राजनीतिमा लाग्ने भन्दै चिकित्सक संघका अध्यक्षले दिए सरकारी सेवाबाट राजीनामा
काठमाडौँ । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् ।
पछिल्लो समय चिकित्सकीय पेसामा भन्दा पनि बढी राजनीतिमा लागेको भन्दै आलोचना हुँदै आएका श्रेष्ठले पूर्णरुपमा राजनीतिमा लाग्न भन्दै राजीनामा दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस निकट डा. श्रेष्ठलाई नेकपा निकट चिकित्सकहरूले सरकारी चिकित्सक भएर सरकारको विरोध गरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका थिए ।
नेपाल सरकार को १० औं तह (उपसचिव) पदमा कार्यरत श्रेष्ठले ३३ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा बिताएका थिए । पछिल्लो समय उनी काभ्रेपलाञ्चोक मेथिनकोट अस्पतालमा कार्यरत थिए ।
‘सरकारी कर्मचारी भएर सरकारको विराध गरेको भन्ने आलोचना आयो’, डा. श्रेष्ठले भने, ‘अब पूर्णरुपमा राजनीतिमा लाग्ने सोचले राजीनामा दिएको हुँ ।’
डा. श्रेष्ठविरुद्ध संघको अध्यक्ष भएपछि बिदा नलिई कार्यालय उपस्थित नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी समेत परेको छ ।
Dr. Muktiram Shrestha